अंक बाँड्न बाध्य बन्यो गण्डकी प्रदेश – Khel Dainik
अंक बाँड्न बाध्य बन्यो गण्डकी प्रदेश
आश्विन १२, २०७८ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । गण्डकी प्रदेश छैटौं डाईनामाईट एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप २०७८ मा अंक बाड्न बाध्य भएको छ । मंगलबार भएको प्रतिस्पर्धामा गण्डकीले मणिमुकुन्द क्लब संग अंक बाडेको हो ।
निकैनै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भारतीय खेलाडीहरु सम्मिलित गण्डकीले पहिलो सेट २६–२४ र दोश्रो सेट ३६–३४ को कठिन जित निकालेको थियो । तर चौथो सेट मणिमुकुन्दलाई १८–२५ ले र चौथो सेट २५–२७ ले सुम्पन पुग्यो । अन्तिम तथा निर्णायक सेटमा गण्डकीले १५–१३ को जित निकाल्दै खेल आफ्नो पक्षमा पा¥यो ।
जित निकालेता पनि गण्डकीले अंक बाड्दै आफ्नो खातामा २ अंक जोड्न बाध्य भयो । यस खेलबाट मणिमुकुन्दले १ अंक जोड्यो । यसका साथै समूह बीमा रहेको गण्डकीको ५ अंक भएको छ । यस समूहमा पुलिसको ६ अंक छ ।
दशरथ रङ्गशालास्थित कभर्डहलमा भएको प्रतियोगितामा टिपटप हेल्प नेपालले प्रदेश नं. २ लाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै महत्वपूर्ण ३ अंक जोड्यो । यसका साथै हेल्प नेपालको ६ अंक भएको छ । अघिल्लो दिन बागमतीलाई पराजित गर्दै ३ अंक जोडेको हेल्प नेपालले मंगलबारको खेलमा प्रदेश नं. २ लाई २५–२१, २५–१७, २५–१६ ले पराजि गरेको हो ।
आजै सम्पन्न महिला तर्फको प्रतिस्पर्धामा अघिल्लो संस्करणको विजेता विभागिय टोली एपिएफले ढोरपाटन स्पोर्टस् क्लबमाथि ३–० को जित निकाल्यो । एपिएफले पहिलो सेट २५–११, दोश्रो सेट २५–७ र तेश्रो २५–१३ ले पराजित गर्दै आफ्नो खातामा ३ अंक जोडेको हो । यस्तै होङ्गवाङ्गजी न्यू डायमण्डले एभरेष्ट भलिबल ट्रेनिङ्ग सेन्टरलाई २५–६, २५–५, २५–१३ ले पन्छाउँदै ३ अंक जोड्न सफल भयो ।
यसका साथै समूह ए बाट टिपटप हेल्प नेपाल र गलकोट स्पोर्टस् क्लब समान ६ अंकका साथ नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यस्तै समूह बी बाट नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकीले अन्तिम आठको यात्रा तय गरेका छन् ।
← रसिया जाने अनुको विदाई फुटसल लिगमा दुई धराने टोलीको जित →
दशैं–तिहार कप कार्तिक १४ देखि आश्विन १२, २०७८
कनकाई र कालिका महिला लिग छनौटको नकआउट चरणमा आश्विन १२, २०७८
एएफसी यु–२३ छनौटमा माल्दिभ्स र श्रीलंका पनि पराजित आश्विन १२, २०७८
नासिर बिश्व च्याम्पियनसिपमा छनौट आश्विन १२, २०७८
सहज जितका साथ झापा सेमिफाइनलमा आश्विन १२, २०७८
आयोजक पहिलो क्वाटरफाइनल मै निराश आश्विन १२, २०७८